Mon – Department of Medical Service
Posted on April 29, 2019 by author 1
(၁) ဆေးရုံတည်နေရာ(Location) -N15.246113, E97.853775 (၂) ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ – ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ရန်ကြီးအောင်ရပ်ကွက်၊ ရေးမြို့၊ မွန်ပြည်နယ်။ ye@mohs.gov.mm (၃) ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ -Medical Ward -Surgical Ward -OG Ward -Child Ward -Ortho Ward (၄) ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ (က) General OPD Timetable- အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ (8:00 to 12:00AM) to (2:00 to 4:00PM) (ခ) Specialist OPD Timetable ... Read More | Share it now!
(၁)။ ဆေးရုံတည်ရှိရာ နေရာနှင့်ဓါတ်ပုံ မော်လမြိုင်မြို့ တောင်ရိုးတန်းလမ်း၊စစ်ကဲကုန်းရပ်ကွက်နှင့် မရမ်းကုန်းရပ်ကွက် (၂)။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်/Fax No, – 057.24841 / 057.24848 Official E mail address – mlmwch 5316 @ gmail.com (၃)။ ဆေးရုံသမိုင်းအကျဉ်း ၁။ (၁၉၁၃)ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် ခရစ်ယာန်နှစ်ခြင်းသာသနာပြု အသင်းတော်က အယ်လင်း မစ်ချယ်အထိမ်းအမှတ် မိခင်နှင့်ကလေးဆေးရုံကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့။ သားဖွားသင်တန်းကျောင်းကိုလည်း (၁၉၂၀)ခုနှစ် တွင် တွဲဖက်ဖွင့်လှစ်။ ၂။ (၁၉၆၅) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၅)ရက်နေ့တွင် ပြည်သူပိုင်သိမ်းယူပြီး မော်လမြိုင်... Read More | Share it now!
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိနေရာ(Location)နှင့်ဓါတ်ပုံ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လပ်စာ – သူနာတန်းလမ်း၊ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက်၊မော်လမြိုင်မြို့ ဖုန်း – ဝ၅၇-၂၇ဝ၄၆/၂၄၈၃၉ Fax No – ဝ၅၇-၂၅၇၁၇ Office E Mail address – doctorkyawmyint @ gmail .com ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ စဉ် လူနာဆောင်နှင့် ဌာနများ လက်ရှိကုတင်ဦးရေ ၁ ဆေးကုသဆောင် ၁၁၆ ၂ ခွဲစိတ်ကုသဆောင်နှင့်... Read More | Share it now!